एक केजी काँक्रोको मूल्य १ लाख ! - Kendrabindu Nepal Online News
एक केजी काँक्रोको मूल्य १ लाख !
सलाद भन्ने वित्तिकै हामी काँक्रो सम्झन्छौ । यो हाम्रो शरिरलाई स्वस्थ राख्नको लागि पनि उत्तिकै भदायक मानिन्छ । हामीले बजारमा पाइने काक्रा प्रतिकेजी ४० देखि ५० रुपैयाँमा पाइन्छ ।
तर, यहा हामी न काँक्रोको कुरा हामी गर्दैछौ त्यसको मूल्य प्रतिकेजी एक लाख रुपैया पर्छ। यो काँक्रो त्यो समुन्द्रमा मात्र पाइन्छ । छिमेकी मुलुक चीनमा यसको खपत अत्याधिक हुने गर्छ । यो अनौठो काक्रा समुन्द्री काक्राको नामले चिनिन्छ ।
मूल्य किन यति धेरै महंगो ?
यो हेर्दा काँक्रोको जस्तै आकारमा देखिन्छ । तर, यो फल वा कुनै सब्जी नभएर यो समुन्द्रमा पाइने एक जीव हो । जो इकोसिस्टमको लागि एकदमै जरुरी हुन्छ । यो बालुवसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ ।
जसले पानीमा रहेर प्राकृतिक फिल्टरको काम गरिरहेको हुन्छ । यो पानीमा बसेर फोहोर, सुक्ष्म इकाई, ब्याक्टेरिया जस्ता कुराहरुको सफाई गर्छ । पौष्टिक तत्वले भरिपूर्ण भएकोले यो एकदमै महंगो हुने गरेको हो । यो औषधीय गुण युक्त हुन्छ ।
यसलाई बेच्नको लागि तौल करिब ४ सय ग्राम हुनुपर्छ । यस जीवको तौल ४५० ग्राम भएको सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ ।
चाइनिजहरुले यस समुन्द्री जीव मिठो मानेर खान्छन् । धेरैजसो यस जीवको लम्बाई १० देखि ३० सेमी (३.९-११.८ इन्च) हुन्छ । यसको सबैभन्दा सानो साइज ३ मीमीको हुन्छ ।
यस समुन्द्री काँक्रोको समुन्द्रबाट निकालेर माटोमुनी गाडिन्छ । त्यसपछि माटोबाट निकालेर पकाइन्छ । पाकेपछि बजारमा बेचिन्छ ।
यस समुन्द्री काक्राको खानुभन्दा पहिले एकपटक पानीमा डुबाउनुपर्छ । पानीमा डुबाउने वित्तिकै यो मुलायम हुन्छ । त्यसपछि यसलाई जसरी पनि खान सकिन्छ ।